Inja yami ichama kakhulu, ngani? | Izinja Zomhlaba
Ukwanda kokuchama enja kwaziwa yigama lezokwelapha i-polyuria, futhi kungadalwa yizinto eziningi. Imvamisa kuyisibonakaliso sesifo esifana nesifo sikashukela noma ukutheleleka, futhi uma ingelashwa ngesikhathi, ingadala ukukhathazeka okukhulu esilwaneni. Kungakho kubalulekile ukuthi siyithole imbangela futhi sithathe isinyathelo ngokushesha.
Kunezizathu eziningi zokuthi inja ingaphuza ichame kakhulu. Isibonelo iminyaka, ngoba izinja ezindala zivame ukusebenzisa uketshezi oluningi; Kodwa-ke, uma bekwenza ngokweqile, bangahle bahlupheke ngezinkinga ezithile ezihlobene nempilo yabo. Ngakolunye uhlangothi, ukudla kunethonya elibalulekile kulesi sici, ngoba uma ukudla kwaso kufaka usawoti omningi, isilwane sizoba nesidingo sokuphuza, ngakho-ke, ukuchama kaningi.
1 Izimbangela zokuthi kungani inja ichama kakhulu
2 Kwenzekani uma inja ichama kakhulu?
3 Ngiyivimba kanjani inja yami ukuthi ichame endlini?
4 Yini okufanele uyenze lapho inja ivuza umchamo wodwa?
5 Inja kufanele iye kangaki ngosuku endlini yangasese?
6 Inja yami ichama kakhulu futhi esobala
7 Inja yami ichama kakhulu ekhaya
7.1 Inkinga yezokwelapha
7.2 Ukufinyelela okulinganiselwe endaweni yokulahla
7.3 Ukungakwazi ukuzibamba ngenxa yokuchitheka kweminyaka noma ukugula
8 Inja yami ichama kakhulu futhi iphuza amanzi amaningi
9 Inja yami ichama igazi
10 Ungazi kanjani ukuthi inja yami inezinkinga zomchamo
10.1 Shintsha umbala womchamo
10.2 Shintsha iphunga
10.3 Shintsha kumvamisa womchamo
11 Ukuqokwa nodokotela wezilwane: ukuhlolwa okwenziwe ukuthola ukuthi kungani inja yakho ichama kakhulu
12 Ukwelashwa okujwayelekile lapho inja yakho ichama kakhulu
13 Inja izala okuvame ukuba nezinkinga zomchamo
Izimbangela zokuthi kungani inja ichama kakhulu
Ngakolunye uhlangothi, Ukudla kunethonya elikhulu kulokhu, ngoba uma ukudla esikudlayo kufaka usawoti omningi, isilwane sizoba nesidingo sokuphuza, ngakho-ke, ukuchama kaningi.
Kodwa-ke, sithola izimbangela ezibucayi ezingaholela ekuchameni ngokweqile. Phakathi kwabo sithola ifayela le- isifo sikashukela mellitus, lokho kucabanga ukwanda okuyingozi kukashukela egazini. Sizokwazi uma inja yethu inalesi sifo ivakashela udokotela wezilwane, ozohlaziya ngokufanele. Uma kunjalo, uzodinga ukwelashwa ngokushesha nokuthola amanzi okuqhubekayo. Lezi zimpawu zingavela futhi ngenxa yalokho okubizwa ngokuthi yi-diabetes insipidus, ekhombisa umsebenzi ongajwayelekile we-hypothalamus kanye / noma i-pituitary gland.
Ngokuvamile, kungenzeka sibhekene nezifo ezidala ukulimala kwezinso, njenge-leishmaniasis, i-hyperthyroidism noma i-Cushing's syndrome, ethinta izitho eziningana, kufaka phakathi izinso.
Ngokomthetho akuyona inkinga ye-alamu, ngoba kujwayelekile ukuthi izinja eziningi zichame kaningi ngosukuKodwa-ke, kuhlale kunengqondo ukukhipha ukuthi akusona isifo ngakho-ke kubalulekile ukwazi izimbangela ezingadala lesi simo ngesilwane sakho.
Isibonelo ukukhathazeka, ngenxa yokwehlukana. Lokhu kwenza umngani wethu onoboya akhombise uchungechunge lokuziphatha okungachazeki futhi phakathi kwabo ukuchama ngaso sonke isikhathi nangokugcizelela okukhulu eduze komnyango.
Indawo yokumaka, okuwukuziphatha okuvame ukwenziwa ngabesilisa nokuningi lapho bengafakwanga i-neutered noma ichithwe, kepha lokho kukhona nakwabesifazane. Bachamela bobabili ezingxenyeni ezihlukene zendlu, ngoba bakhetha kanjalo.
Kuvamile nasezinjeni ezisese kwinqubo yokufunda., ukuthi abaqeqeshiwe kahle noma ukuthi bayahamba kancane kakhulu ukuyachama. Umqondo ukuthi abanikezwa ukunakwa okufanele hhayi kuphela lapho befundiswa, kepha futhi nokuthi banikezwa inani lezitolo ezidingekayo ukuzikhulula.
Ukunaka kungenye imbangela engahle idale lokhu kuziphatha, ngoba inja iyazi ukuthi ukuchama ngaphakathi endlini nasezindaweni ezahlukahlukene ngokungangabazeki kuzokuthakazelisa.
Kwenzekani uma inja ichama kakhulu?
Iqiniso lokuthi inja yakho ichama ngaso sonke isikhathi futhi yonke indawo, Kufanele ngaso sonke isikhathi kube yisizathu sokubhekisisa futhi uye ekubonisaneni nodokotela wezilwaneNjengoba ukuhlolwa okwenziwe yilochwepheshe kuzokwembula noma cha ucwaningo oluthile, kanye nokwelashwa okuhambisanayo.
Ungakhohlwa ukuthi njengoba kungaba yinkinga yokuziphatha, futhi kungaba yisifo esithile esenza inja ichame ngaso sonke isikhathi ngakho-ke, idinga inkinga yayo yezempilo ukuthi inakekelwe.
Ngiyivimba kanjani inja yami ukuthi ichame endlini?
Lapho sinenja ekhaya, kufanele ube nokubekezela okuningi ukuze ubafundise futhi wenze ukuhlangana kube mnandi kuwo wonke umuntu. Inja inobuhlakani obanele bokugcina imithetho, futhi yithina okufanele sinakekele ukubazisa ukuthi bayini.
Vele, ngaso sonke isikhathi usebenzisa ukuqiniswa okuhle ukuqinisekisa ukuthi akachami ngaphakathi endlini, kepha lapho unquma khona, kepha ungakufinyelela kanjani?
Owokuqala yi- ukuqeqeshwa ngaphandle kokujeziswa, uhlale unethemba. Nikeza ama-oda usebenzisa imiyalo okuqondakala kalulaLapho echama lapho engafanele ukwenqaba khona ngoHAYI onamandla futhi oqinile, akukho lutho olumayelana nokumemeza noma izinkulumo ngoba ngeyokuqala uzomethusa futhi umcabangele bese kuthi ngesesibili, umane umdide.
Uma inja iphikelela ukuyenza, ikakhulukazi lapho iwumdlwane, ungamnaki, ngoba kuyindlela yokwazisa ukuthi ucasukile nokuthi lokho akwenzile akulungile. Qinisa lapho ethola okulungile ngokwelashwa, okungaba yinoma yini kusuka esilwaneni kuya ekuphathweni kwezinja.
Ngenkathi le nqubo yemfundo ihlala, ungakwazi sebenzisa ama-soaker ukuze uma bechamela ekhaya, bazi ukuthi kufanele bakwenze kuleyo ndawo.
Yini okufanele uyenze lapho inja ivuza umchamo wodwa?
Lapho beyimidlwane nje, kujwayelekile kakhulu kubo ukuvuza umchamo ngenkathi bafunda ukulawula, ngalo mqondo, lezi zinkinga zokuphunyuka ngokungazibandakanyi zihlukaniswe ngamaqembu amathathu:
Ukungabi nemikhuba yokuqeda.
Ukuvuza okubangelwe yinjabulo eyeqile noma umkhiqizo wokwesaba noma wokuhambisa.
Ukukhubazeka ohlelweni lokuchama okwenza kube nzima ukulawula ukuchama.
Ukulungisa iphuzu lokuqala, Umdlwane kufanele unikezwe isikhala endlini lapho efinyelela khona ngokuphelele ukuzikhululaKubalulekile futhi ukuthi kusukela ngesonto lesishiyagalolunye uqale ukumkhiphela emgwaqweni izikhathi eziningana ngosuku futhi ngasikhathi sinye, ukuze ajwayele ukukwenza emgwaqweni.
Mayelana nephuzu lesibili elixhumene nemizwa, Kuyinto elula esimweni senjabulo eyeqile, ukuthi unciphise ukushuba kwemidlalo nokuziphulula lapho ufika ekhayaKungcono ukuthi umbingelele ngomoya ophansi bese umphulula lapho ezolile.
Uma kungenxa yokuhanjiswa ngenxa yokukhala noma ukujeziswa kwangaphambilini, kungcono ukuqeda lezo zijeziso empandeni, hhayi ukubaphoqa uma besaba futhi babuyise ukuzethemba ngokubaklomelisa lapho besivumela ukuba sisondele.
Kubantu abadala, futhi lapho sesivele sikhiphe isinqumo sokuthi izinkinga zisuselwa ezimweni ezilawulekayo njengokulahla ukukhathazeka, ukumakwa kwendawo noma inqubo yokufunda, into enhle kakhulu ongayenza ukuwayisa kudokotela wezilwane ukuze unqande noma yikuphi ukugula.
Inja kufanele iye kangaki ngosuku endlini yangasese?
Leli phuzu liyathakazelisa, ngoba ukuphuma ngokuqinisekile kuhlobene kakhulu neminyaka yenja kanye nesimo sayo sempilo. Ukukhipha umdlwane ukuze uzikhulule akufani nokuthatha umuntu omdala noma inja endala, ngokwesibonelo eyokuqala idinga ukuphuma kakhulu ngenkathi ifundiswa.
Eqinisweni, ochwepheshe bakhombisa lokho kuze kube amasonto ayi-8 kufanele siyikhiphe izikhathi eziyi-12 ngosuku Futhi uma uzibuza ukuthi kungani bebaningi kangaka, incazelo ukuthi basafunda ukwenza izinqubo zabo zokugaya ukudla futhi badinga ukuphuma izikhathi eziningi zokuzikhulula nokuchama.
Le mvamisa iyancipha njengoba bekhula, yile ndlela labo abaphakathi kwamasonto ayi-15 kanye nama-22 badinga ukuphuma okungenani ama-8 ngosuku. Ngemuva kuka-22 ntambama kuze kube ngu-32 ntambama, ukuhamba kuyehla kuye ku-6 futhi njengabantu abadala baba kathathu kuya kathathu ngosuku.
Inja yami ichama kakhulu futhi esobala
Umbala womchamo wenja yakho ungaveza okuningi okwenzekayo kuye, Uma kucacile futhi uba nokuhamba kwamathumbu kaningi, cishe uphuza amanzi amaningi.
Kulokhu, kubalulekile ukuthi unake iqiniso lokuthi uphuza amanzi amaningi kunokujwayelekile, ngoba indlela ongadla ngayo ingaba nosawoti omningi, ikakhulukazi uma sijwayele ukubanika ukudla abazokudla ngabantu.
Kungenzeka futhi ukuthi okuphakelayo, noma ngabe kumile noma kumanzi, ukudla okungokwemvelo ngisho nokudla okulula, kuqukethe inani eliphezulu le-sodium ngakho-ke kufanele kuguqulwe ngokusekelwa ngudokotela wezilwane, ngoba uma kungenjalo kuzoqhubeka kuchame kakhulu futhi amakristalu amancane kuvele ngisho nasemchameni.
Inja yami ichama kakhulu ekhaya
Lokhu kungashukunyiswa yizimbangela ezahlukahlukene esizokwazisa ngazo ngezansi.
Esokuqala ukuthi phuma nochwepheshe uma ngabe lokhu kuchama okuqhubekayo kungahlobene nesifo womgudu womchamo, izinkinga zemizwa, izinkinga ze-endocrine, i-polydipsia, njll.
Ukufinyelela okulinganiselwe endaweni yokulahla
Ungahle ungabi nokufinyelela okwanele noma okwanele kwezidingo zakho, endaweni oqonde ukuyikhulula kuyo, kungaba emgwaqweni, egcekeni noma esivandeni.
Ukungakwazi ukuzibamba ngenxa yokuchitheka kweminyaka noma ukugula
Kuzo zonke lezi zimo, okuhle ukuwaphatha ngemithi ekhonjiswa ngudokotela wezilwane. Lezi zimbangela esezivele zichaziwe futhi zachazwa ngaphambi kwazo nazo zibalwa, njengokukhathazeka ngokwehlukana, ukumaka, ukuzithoba, isasasa, ukwesaba nokuheha ukunakwa.
Inja yami ichama kakhulu futhi iphuza amanzi amaningi
IPolyuria itholakala ngokuba khona kwayo ngezici ezahlukahlukene ezingahle zixhunyaniswe nesifo esithile enjeni. Izifo ezifana nesifo sikashukela noma izifo zomgudu womchamo, ngokungangabazeki zidala ukuchama ngokweqile futhi kwesinye isikhathi ngaphandle kokulawulwa ngakho-ke, kufanele baphathwe ngesikhathi ukuze bangayekethisi impilo yenja.
Isibonelo, inja esegugile inesidingo sokudla uketshezi oluningi futhi lokhu kumenza achame kakhulu, okusemikhawulweni ejwayelekile; manje uma ubona ukuthi uphuza amanzi ngokweqile kufanele unqande inkinga yezempilo. Kunoma ikuphi, into ephumelela kakhulu ukuthi uyiyise ekubonisaneni nodokotela wezilwane.
Inja yami ichama igazi
Esinye sezimo ongazithola khona ukuthi inja yakho ichama kakhulu kodwa futhi ikwenza lokho nangegazi. Kulokhu, umchamo ungaphuma ubomvu kancanyana, noma igazi elisha futhi eliphilayo. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukuya kudokotela wezilwane ngoba kungakhombisa ukopha ngaphakathi (kubangela inkinga enkulu emzimbeni), ukuvinjelwa kwesinye, isilonda endaweni, isimila ...
Ngalo mqondo, ungathola izindlela ezintathu zokuchama igazi: ngesimo samaconsi, igazi eliphuma lapho lichama; ngesimo segazi elijiyile (imvamisa limnyama kunokujwayelekile); noma igazi elimsulwa, lichama igazi kuphela.
Ungazi kanjani ukuthi inja yami inezinkinga zomchamo
Okunye ukwehluleka okuyinhloko kwabanikazi abaningi ukuthi baya kudokotela wezilwane lapho sekuhlwile impela, okungukuthi, lapho inja inezinkinga ezinkulu kakhulu ukuthi, ukube zitholwe phambilini, isisombululo besizokwenzeka kakhulu. Kepha lokho kusho ukubuka ngoba inja iyakwazi ukuxwayisa ukuthi inezinkinga zomchamo. Manje, ngalokho, kufanele wazi izimpawu ezikhiqizayo, futhi lezi ezilandelayo:
Shintsha umbala womchamo
Umchamo, njengabantu, ungaba nemibala ehlukahlukene. Kodwa umchamo "ojwayelekile" uvamise ukuba nombala ophuzi, awunamandla kakhulu noma awucacile. Kuthiwani uma umchamo wenja yakho ungekho kanjena? Lokho kungakhombisa inkinga.
Isibonelo, uma umchamo ubomvu ngokubomvu, noma umbala onsundu, kungakhombisa ukuthi wopha ngaphakathi (futhi kufanele wazi ukuthi kungani); noma uma umchamo uluhlaza noma onsundu, kungaba ngenxa ye-bilirubin, ephakeme kakhulu emzimbeni.
Uma ukunaka lokho, uzosiza ukugcina impilo yesilwane sakho.
Esinye isibonakaliso esikuxwayisa ukuthi kunenkinga enkulu yokuchama, ngaphandle kokungabaza, iqiniso lokuthi iphunga lomchamo liqonda kakhulu. Esimweni esinjalo, ingahle ibe namandla kakhulu, kepha futhi ingashintsha iphunga, okungukuthi, ukuthi inephunga lensimbi, noma okuthile okubolile, ngakho-ke uzoba ngaphambi kwezinkinga zomchamo noma uhlelo lokuzala, futhi kufanele ukuhlole.
Shintsha kumvamisa womchamo
Kulokhu, iqiniso ukuthi uchama kakhulu, kepha qaphela. Abesilisa abaningi banalokhu kuziphatha ngoba abakwenzayo ukumaka indawo yabo. Ngakho-ke, babamba umchamo futhi bawukhulula njalo ukuze ezinye izilwane ziqonde ukuthi le ndawo "ngeyabo".
Enye indlela ongayithola ukuthi uchama kaningi kepha kuncane kakhulu, okungakhombisa ukuthi unezinkinga zokukhipha isinye, noma ukuthi kubuhlungu.
Ngabe inja yakho ayikhathazeki lapho ichama? Ngabe unzima ukukwenza? Kunezimo (nazo ezibucayi) lapho inja yakho ungahle uvinjelwe futhi ungakwazi ukuchama kahle. Ngenxa yalokho, kukubangela ubuhlungu nokungakhululeki, kanye nokukwenza ungabi nakuhlaliseka.
Ngokunikezwe lokhu, kubalulekile ukumyisa kudokotela wezilwane. Ngokujwayelekile, lokhu kungenxa yokutheleleka komchamo, okuthi, uma kubanjwa ngesikhathi, kungagugi (izinsuku ezimbalwa zokwelashwa futhi kuzophinda kufane), kepha futhi kungenxa yamatshe ezinso. Yingakho kufanele wenze izivivinyo ngoba, uma kungenzeka ukutheleleka, zingafinyelela ezinso futhi zidlulele nasegazini.
Ukuqokwa nodokotela wezilwane: ukuhlolwa okwenziwe ukuthola ukuthi kungani inja yakho ichama kakhulu
Uma ekugcineni ungazolile futhi uthathe isinqumo sokubonana nodokotela wezilwane, kufanele wazi ukuthi angaqhuba uchungechunge lwezivivinyo ukuthola ukuthi yini engalungile ngenja yakho.
Lezi zivivinyo zidlula ku- ukuhlolwa kwegazi (ukubona ukuthi kunezinkinga zangaphakathi, ukutheleleka, njll), ezinye imichilo yomchamo nesidumbu somchamo (Yibo abasetshenziselwa ukwazi ukuthi yini engenzeka kuwe futhi banqume uhlobo lwezokwelapha okufanele lulandelwe).
Uma kwenzeka kutholakala ukutheleleka, into ephephe kakhulu ukuthatha isiko lesampula ukuze kuhlolwe ukuthi luhlobo luni lokutheleleka (ukwazi ukubeka ukwelashwa noma okunye). Lokhu kuvame ukushesha, kepha kwesinye isikhathi kuthatha amahora afinyelela kwangu-24, ngakho-ke ama-vets anikela ngama-antibiotic abanzi futhi angahluka ngokuya ngemiphumela.)
Obunye ubufakazi ochwepheshe abathembele kubo yibo ama-ultrasound nama-x-ray akutshela uma kukhona izimila, ukuvuvukala, noma ukopha kwangaphakathi chaza isimo senja. Futhi i-UPC, isivivinyo sokuhlola ukuthi ingabe izinso zisebenza kahle yini noma uma kukhona ukulahleka kwamaprotheni, zingenye yezisetshenziswa kakhulu.
Ukwelashwa okujwayelekile lapho inja yakho ichama kakhulu
Lapho udokotela wezilwane esezenzile izivivinyo ezifanele, uyakwazi ukunikeza ukuxilongwa kwalokhu okwenzeka enja yakho. Ezimweni eziningi, lapho inja ichama kakhulu, isizathu esikhulu ukuthi inegciwane lomchamo. Lokhu akusho ukuthi azikwazi ezinye izinhlobo zezinkinga, ukuthi zikhona.
Kodwa-ke, okuvame kakhulu ukuthi ukutheleleka nalokhu ilashwa ngemithi elwa namagciwane ethathwe ngomlomo (kwesinye isikhathi kuhlatshwa ukuthi kusebenze ngokushesha) ukuze kubuyiswe isimo esijwayelekile senja.
Lapho inja ivame ukuba nezifo njalo, kunconywa ukwelashwa kokuvikela, okungukuthi, ukugcina umuthi, kanye shintsha indlela ophila ngayo, ukuze lesi simo singenzeki.
Inja izala okuvame ukuba nezinkinga zomchamo
Inja ngayinye inezici eziningana futhi zithambekele kakhulu ezifweni ezithile. Endabeni yezinkinga zomchamo, kunezinhlobo ezithile ezingaba nezinkinga eziningi, ngokwesibonelo, ukuchama kakhulu, ukuchama kancane, ukungakwazi ukuzibamba, ukuthuthukisa izimila, njll.
Phakathi kwazo kukhona: I-Dalmatian, i-Yoshire terrier, i-Poodle, i-Bulldog, i-Cocker, i-Bichon, i-Russian Terrier, i-Lhasa Apso noma i-Miniature Schnauzer. Akusho ukuthi bazoba nale nkinga, kepha maningi amathuba okuthi bahlupheke ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Inja yami ichama kakhulu, ngani?
Ntambama, nginenja enezinyanga ezi-4 izichamela futhi iphuza amanzi kaningi kakhulu.Kungaba yini ukutheleleka komchamo? Yini engingayinika yona noma ngiyenze?
URachel Sanchez kusho
Sawubona carmen. Iseluleko sami ngukuthi uhambise inja yakho kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu, ukuze ikwazi ukuyihlola futhi ibheke ukuthi kukhona yini izinkinga, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi isencane kakhulu. Unenhlanhla. Ukwanga.
Phendula uRaquel Sánchez
Umdlwane wami unezinyanga eziyi-9 kuphela futhi uchama kakhulu noma ngabe engaphandle kwendlu futhi kunezikhathi lapho umchamo wakhe uphuma uphuzi ngokwedlulele.
Sanibonani. Inja yami yaqala ukwelashwa ukungezwani komzimba nama-antibiotic wezingane kanye ne-loratadine. Kusukela lapho uqala ukwelashwa, awukwazi ukubamba umchamo wakho futhi wenziwa noma yikuphi. Ngaphambi kwayo bekuhambisana kakhulu nendawo. Udokotela wezilwane uthi kuyinto ejwayelekile kepha akasiniki izimpikiswano futhi sikhathazekile ngokushintsha kokuziphatha, sikhathazekile ngokuthile emzimbeni wakhe okungasebenzi kahle. Ucabangani ngakho? Thola ukubonga kwethu kusengaphambili.
Sawubona Gueida, ngiyabonga ngokuphawula kwakho. Uma ungabaza izincazelo zikadokotela wezilwane, kungcono ucele umbono wesibili, ukuze wehlise umoya, ngoba kulokhu abakunikanga izimpikiswano ezifanele. Sikufisela inhlanhla nokugona.
Sawubona, sinenja eneminyaka emibili ubudala yeBull Terrier. Ezinsukwini ezimbili ezedlule uchame kaningi nomchamo omncane, namhlanje ukwenze ngaphakathi endlini into angakaze ayenze. Sinezivakashi ekhaya, ngabe kuzoheha ukunakwa noma kumele ngimyise kudokotela wezilwane?
Sawubona Bibi, ngingakwenza ukuheha ukunakwa, kepha uma ungabaza, kungcono ukuthi udokotela wezilwane ahlole inja yakho, ikakhulukazi uma iqhubeka nokuziphatha okufanayo ngemuva kokuvakashelwa. Siyabonga ngokuphawula nangenhlanhla. Ukwanga.
Sawubona Raquel, ngine-Yorsay Terrier eneminyaka engu-12 ubudala, inja yami, nakuba ngiyehlisa kathathu ngosuku, ichama kakhulu endlini, ikakhulukazi izikhathi eziningana ebusuku nasekuseni futhi ibechichima, izikhathi eziningi umchamo wayo. akanambala angazi ngenzenjani futhi ngikhathazekile ngokuthi angase abe nokuthile ngenxa yeminyaka yakhe noma kuyinto evamile kuye. Ngiyabonga kusengaphambili? ♥
Sawubona Belén, ngiyabonga. Iqiniso ukuthi lapho sezikhulile izinja zingahlukunyezwa umchamo, njengathi. Lokhu kungaba yinkinga ngeYorkshire yakho, kepha kungcono uvakashele umtholampilo wezilwane ukuze uqiniseke ukuthi ayikho inkinga enkulu. Futhi, khumbula ukuthi ukuhlolwa njalo kwezilwane kubalulekile ezinjeni eziphezulu. Ngikufisela inhlanhla, ngiyethemba ukuthi esimweni senja yakho kuyinto encane. Ukwanga.
Sawubona, nginezinja ezi-pincher zezinyanga ezi-3 ngehora, angachama cishe amahlandla ama-3, kungenzeka yini ukuthi uphethwe okuthile okubucayi?
Sawubona Lina. Kungaba ngenxa yezizathu eziningana, kepha kungcono ukuya emtholampilo wezilwane uyohlolwa inja yakho. Sikufisela inhlanhla nokugona.
Umdlwane wami uneminyaka engu-6, uyiYorkshire futhi uphuza kakhulu futhi uchama kakhulu, kungakuhle ukumupha. ICortisone?
Sawubona manuela. Iseluleko sami ukuthi ungalokothi unikeze noma imuphi umuthi umdlwane wakho ngaphandle kokubonisana nodokotela wezilwane kuqala, ngoba ungamlimaza kakhulu. Kungcono ukuya ekubonisaneni nodokotela wezilwane ukuze uchwepheshe ahlole iYorkshire yakho futhi athole ukuthi ngabe kukhona yini izinkinga. Ukwanga.
Sanibonani, nginenja enezinyanga ezine ubudala futhi ngifisa ukwazi ukuthi ngihlukanisa kanjani uma ichama kakhulu noma ejwayelekile ngoba ayiphuzi manzi amaningi kodwa ihlale ichama kancane. Ngiyabonga
Sawubona Danna. Ukuziphatha kwenja yakho kungenzeka kungenxa yobuncane bayo. Kodwa-ke, kungcono ukubuza udokotela wezilwane ekuhlolweni kwakhe okulandelayo, ukuze uqiniseke ukuthi azikho izinkinga. Ukwanga!
Inja yami icishe ibe neminyaka engu-4 ubudala futhi isisindile, ingamenza achame kaningi; futhi wenze okuncane.
NgineStanfor America futhi kusukela izolo ubelokhu echama ngaphakathi endlini, yize umkhiphile emgwaqweni, lapho umkhipha ngesikhathi cishe izikhathi eziyi-7 noma eziyi-8 ezedlule akubonakali ukuthi unemfiva, okungaba, ngiyabonga kakhulu
oscar carattini kusho
Nginenja endala eyi-french bulldog
Usanda kuqala ukudla kakhulu, wakhuluphala kancane, waphuza amanzi amaningi wachama. Akafiki emnyango awuchamayo.
Ngamyisa kudokotela wezilwane owenza ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile
Lokho okumele ngikwenze?
anciphise amanzi kancane?
ukunciphisa isabelo sokudla kancane?
Ngabe kuzodingeka senze ezinye izifundo? Yikuphi?
Phendula ku-oscar carattini
Sawubona, inja yami ineminyaka engu-10 futhi inesifo sikashukela, ichama kakhulu futhi idla kancane, ngiyijove nge-insulin, yini engingayinika yona, ikhuluphele kakhulu
Sawubona. Sine-bug eneminyaka emibili ye-Maltese. Sekuyizinsuku lapho lapho simhlisa phansi ngaphambi kokufika emgwaqweni uyalunguza ethekwini. Simhlisa kathathu ngosuku. Yize emthethisa kakhulu futhi uyakwazi ngoba uphuma egobise ikhanda, uyaqhubeka nokwenza njalo. Ingabe othile angasisiza?